नेपालको संविधान (२०७२) को अनुसूची ८ ले ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा’लाई स्थानीय तह (सरकार) को अधिकार अन्तर्गत राखेको छ । संविधानको धारा (१) मा नै ‘यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ उल्लेख भएकाले स्थानीय सरकार गठन हुनासाथ शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने कानुन स्वतः निष्कृय भइसकेको छ । अझ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको छ । यसमा ‘शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन’ स्थानीय सरकारले नै गर्ने भनिएको छ । यस अवस्थामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सबै कार्यहरु स्थानीय सरकार (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) ले नै सम्पादन गर्नु पर्नेछ । यसरी हेर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय विघटन हुनु अगाडि नै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम, कार्यविधि लगायतका नीतिगत प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ । यस्ता नीतिगत प्रावधानहरु तयार गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु नै प्रमुख उद्देश्य रहने भएकाले निम्न कुराहरुमा ध्यान पु¥याउनु बान्छनीय हुनेछ ।
गाउँ/नगर शिक्षा समिति
गाउँपालिका/नगरपालिकाभित्र शिक्षा सम्बन्धी नीति–नियम निर्माण गर्ने, योजना बनाउने, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने लगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने कार्य गर्ने निकाय गाउँ÷नगर शिक्षा समिति हो । यसमा सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहने गरी गठन गर्न आवश्यक छ । सँगसँगै यो समिति चुस्त–दुरुस्त र छरितो रहन पनि आवश्यक छ । अन्यथा बैठक बस्न नै कठिन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । बरु सानो आकारको शिक्षा समिति बनाई आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदलहरु बनाउन सकिन्छ । विगतमा जिल्ला र केन्द्रमा अभ्यास गरिएको ‘सामाजिक सम्वाद समिति’लाई पनि गाउँ तथा नगर स्तरमा गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा हुने गरेको अति राजनैतिक चलखेलले कतिपय अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै गठन हुननसक्ने, झैं–झगडा भई धनजनकै क्षति हुने लगायतका विकृतिहरु देखिएकै हुन् । वि.व्य.स. गठन भएपनि विभिन्न पक्षधरिताका कारण कार्यसम्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने गरेको हो । करार÷अस्थायी शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा वि.व्य.स.को भूमिकाकै कारण अनावश्यक चलखेल भएको र माथि उल्लेखित कुरा विकृतिहरु आएको कुरामा विवाद छैन । तसर्थ विगतको तितो अनुभवलाई ध्यान दिई सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी विवाद रहित तरिकाले वि.व्य.स. गठन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै शिक्षक नियुक्तिमा वि.व्य.स.को भूमिकालाई घटाउन पनि आवश्यक देखिन्छ ।
करार शिक्षक नियुक्ति
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति नै चलखेलको कारण रहेका कुरा माथि नै उल्लेख गरियो । सो विकृति अन्त्य गर्न र ‘हाम्रा मानिस’ भन्दा ‘राम्रा मानिस’ नियुक्ति गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको छ । सो का लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका दरबन्दी वा अनुदान कोटा (राहत) मा करार शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि गाउँपालिका÷नगरपालिकामा शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था गर्ने र आÇनो कार्य क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुमा करार नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्ने, छनौट परीक्षा सञ्चालन गर्ने र वि.व्य.स.लाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकको कार्यकुशलताले विद्यालयको समग्र गुणस्तरमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । विगतमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने स्पष्ट प्रावधान भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको थिएन । यसले गर्दा विभिन्न प्रकारका प्र.अ.हरु कार्यरत रहिरहेको अवस्था छ । माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षक हुदाँहुदै निजी स्रोतका शिक्षकलाई समेत प्र.अ. बनाएको उदाहरण प्रसस्तै पाइन्छ । तसर्थ प्र.अ. नियुक्तिका लागि बरिष्ठता, योग्यता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरी प्रतियोगितात्मक छनौट विधिबाट गाउँपालिका÷नगरपालिका भरिका विद्यालयहरुमा एकै पटक प्र.अ. नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसरी नियुक्ति गर्दा निश्चित अवधिका लागि गर्ने र पदावधि पूरा भएपछि पुनः छनौट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा प्र.अ.हरुले आफूलाई निरन्तर अपडेट गराइरहनु पर्ने हुन्छ ।
स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन
स्रोत व्यक्तिहरु पदीय हिसाबले शिक्षक नै हुन् । उनीहरुको सट्टामा अर्को शिक्षक नियुक्ति गरी कामकाजका लागि सो पदमा पठाइएको हुन्छ । तसर्थ प्र.अ. नियुक्ति जस्तै स्रोत व्यक्ति नियुक्ति पनि प्रतियोगितात्मक छनौट विधिबाट नियुत्ति गर्ने र पदावधि सकिएपछि विद्यालयमा नै फर्कनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्दा अन्य शिक्षकहरुले पनि अवसर पाउने र स्रोत व्यक्तिहरुमा पनि आफू शिक्षक नै भएको यथार्थबोध भइरहन्छ । उनीहरु पनि नियमित रुपमा पेशागत रुपमा अपडेट भइरहनुपर्ने हुन्छ ।
दरबन्दी मिलानको कार्यविधि
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्ने जिम्मा गाउँ÷नगरपालिकालाई दिएको छ । हाल अधिकांश स्थानीय तहमा आधारभूत (प्राथमिक) तहमा दरबन्दी बढी तथा आधारभूत (निम्न माध्यमिक) र माध्यमिक तहमा दरबन्दी नपुग रहेको अवस्था छ । तसर्थ आÇनो गाउँ÷नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरुमा दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै तल्लो तहमा कार्यरत द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई माथिल्लो योग्यताका आधारमा माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।
विद्यालय कर्मचारी, सहयोगी र बाल विकास केन्द्रका शिक्षकबारे
सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा कर्मचारी तथा सहयोगीहरुको व्यवस्था गरेको छ । तर उहाँहरुलाई अत्यन्त न्युन पारिश्रमिक दिइएको छ । उहाँहरुको दरबन्दीको व्यवस्था भएको छैन । स्थायी हुने, बढुवा हुने व्यवस्था पनि छैन । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षक (सहयोगी कार्यकर्ता) हरुको हालत पनि त्यस्तै छ । स्थानीय सरकारहरुले यी कुराहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
माथि उल्लेखित विषयहरु विगतका अभ्यासका क्रममा देखिएका कमी कमजोरीबाट समेटिएका हुन् । यस्ता अन्य अनेकौं विषयहरु हुन सक्छन् । ती सबैका लागि मौजुदा शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र विभिन्न कार्यविधिहरुलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिई स्थानीय सरकारहरुले आÇनो शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम र कार्यविधिहरु तयार गर्न सक्दछन् ।